Philips Care Straight & Curl Straightener HP8345/00 ~ ICT.com.mm
HomePersonal Care ElectronicsPhilips Care Straight & Curl Straightener HP8345/00
Philips DryCare Essential Hairdryer BHD004/00Back to Personal Care ElectronicsPhilips SatinShave Essential Wet and Dry Electric Shaver HP6341/00
Philips Care Straight & Curl Straightener HP8345/00
Warranty:2Years The new Philips Straight & Curl gives youastraight, wavy and curly look while being gentler on your hair. Hair care with 3x more caring styling thanks to... [Learn more]
Brand: PHILIPSFilter by: Hair Care, Htoo Char Aung Kyaw
The new Philips Straight & Curl gives youastraight, wavy and curly look while being gentler on your hair. Hair care with 3x more caring styling thanks to Ionic conditioning, Silky smooth ceramic plates and digital temperature control.
ဆံပင်ကိုဖြောင့်ပြီးတော့မှ ကောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် လှိုင်းတွန့်ပုံသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို ဆံပင်အလှပြုပြင်မှုကိုမဆို ငြင်သာစွာပြုလုပ်ပေးမဲ့ Philips Straigh & Curl ဆံပင်ဖြောင့်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ အားဖြည့်လိုက်တဲ့ Negative Ions တွေက ဆံသားကို နှိုးဆွပေးမှာဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို အလိုရှိတိုင်း ပုံသွင်းနိုင်ဖို့ ပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်မှာရှိတဲ့ဖယောင်းအလွှာတွေကို ချောမွေ့စေပြီး ဆံသားတွေကို ပိုမိုတောက်ပလှပလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆံပင်အမျိုးအစား မတူညီတဲ့အတွက် အသုံးပြုရတဲ့ အပူချိန်ကလည်း လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ စက်ရဲ့အပူချိန်ကို ဒီဂျစ်တယ် Setting နဲ့ ချိန်ညှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် မိမိရဲ့ ဆံပင်အမျိုးအစားအတွက် အလှဖန်တီးမှု ပညာရှင်တွေ အကြံပေးထားတဲ့ အပူချိန်အတိအကျအတိုင်း အသုံးပြုပြီး ဆံနွယ်တွေကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကောက်တဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးရရှိဖို့အတွက် အပူပေးပလိတ်ပြားတွေကို ခပ်ခုံးခုံး ပြုလုပ်ပေးထားပြီး စက္ကန့်(၃၀)အတွင်းမှာ ပလိတ်ပြားတွေဟာ အသုံးပြုဖို့သင့်တော်တဲ့ အပူချိန်အနေအထားကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန် ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဆံပင်တွေကို မထိခိုက်စေဖို့အတွက် ပလိတ်ပြားတွေရဲ့ အပူချိန်က 200°C အထက်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ အပူချိန်ကို တရှိန်ထိုးမြှင့်တင်မပေးတော့ဘဲ 5°C ဆီသာ တိုးမြှင့်ပေးမဲ့ Thermoguard လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Digital settings with adjustable heat to get smooth results.